Abavelisi beBhokisi yokuhanjiswa kweChina kunye nabaXhasi - iChaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeTelecom > Ibhokisi yokuhambisa
Ibhokisi yokuhambisa eyenziweyo e-China ingathengwa kwi-Chaolian Elektroniki ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Iibhokisi ezingama-30 zeBhokisi yokuSasazwa yangaphakathi efakwe kwi-3 ngasemva kwesakhelo seNtaba
Le yiBhokisi yoSasazo engaphakathi ngaphakathi eyi-30 efakwe kwi-3 ngasemva Isakhelo seNtaba, kufanelekile kwisibini imodyuli yokubuyela umva krone. Sibonelela ngebhokisi yokuhambisa yangaphakathi ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho olungqongqo, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
Iibhokisi ezingama-30 zeBhokisi yokuSasazwa yangaphakathi efakwe kwi-3 Pair Back Mount Frame-1
Le yibhokisi yokuhanjiswa kwangaphakathi engaphakathi efakwe kwi-3 isibini ebuyayo ye-Mount Mount Isakhelo-1, ilungele isibini semodyuli yokubuyela umva krone. Olu hlobo lunokwenza isibini esingama-30, 50pair kunye nesibini esi-100. Sibonelela ngebhokisi yokuhambisa yangaphakathi ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho olungqongqo, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
Ibhokisi yokuhambisa yasendlini eyi-50 ngababini ifakwe i-5 ngasemva kwesakhelo seNtaba
Le yiBhokisi yoSasazo engaphakathi engaphakathi e-50 efakwe kwi-5 ngasemva Isakhelo seNtaba, kufanelekile kwisibini imodyuli yokubuyela umva krone. Olu hlobo lunokwenza isibini esingama-30, 50pair kunye nesibini esi-100. Sibonelela ngebhokisi yokuhambisa yangaphakathi ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho olungqongqo, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
I-100 yeBhokisi yokuSasazwa kwangaphakathi ngaphakathi ifakwe kwi-10 Pair Back Mount Frame
Le yiBhokisi yoSasazo engaphakathi ye-100 yoFakelo lweBhokisi eFakwe kwi-10 ngasemva Isakhelo seNtaba, kufanelekile kwisibini imodyuli yokubuyela umva krone. Olu hlobo lunokwenza isibini esingama-30, 50pair kunye nesibini esi-100. Sibonelela ngebhokisi yokuhambisa yangaphakathi ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho olungqongqo, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
Ibhokisi yokuhanjiswa kwangaphakathi kwe-50 (Uhlobo lwase-UK)
Le yiBhokisi yoSasazo engaphakathi eBhangayo engama-50 (Uhlobo lwase-UK), ilungele isibini semodyuli yangemva yokunyuka. Olu hlobo lunokwenza isibini esingama-30, 50pair kunye nesibini esi-100. Sibonelela ngebhokisi yokuhambisa yangaphakathi ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho olungqongqo, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
Ibhokisi yokuhanjiswa kwangaphakathi kwe-100 (Uhlobo lwase-UK)
Le yiBhokisi yoSasazo engaphakathi eBhangayo eyi-100 (Uhlobo lwase-UK), ilungele isibini semodyuli yokubuyela umva krone. Olu hlobo lunokwenza ama-50pair kunye ne-100 pair. Sibonelela ngebhokisi yokuhambisa yangaphakathi ngaphezulu kweminyaka engama-20 njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, ikhonkco elingaphezulu lenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho olungqongqo, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, ul njl.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Ibhokisi yokuhambisa abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Ibhokisi yokuhambisa eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.